ONG Tolotsoa: “Atao aloha ny hampazoto ny olona hifidy” | NewsMada
ONG Tolotsoa: “Atao aloha ny hampazoto ny olona hifidy”
“Efa manitsy hatrany izahay firaisamonina sivily hoe atao aloha izay hampazoto ny olona voasoratra ao anatin’ny lisitry ny mpifidy handeha hifidy. Na ny olona ao anatin’ny lisitry ny mpifidy aza tsy tonga mifidy, ahoana no ampiana hatrany ny ao anatin’ny lisi-pifidianana isan-taona?”
Io ny fanambaran’ny eo anivon’ny ONG Tolotsoa, i Fabien Privat Miadana.
Tsy mihoatra ny 30% ny olona mifidy isaky ny misy fifidianana no vokatr’izany tsy fahatongavan’ny olom-pirenena amin’ny fifidianana izany.
Misy zavatra mila ovaina ao ary tsy maharesy lahatra ny olona amin’ny fifidianana. “Mila hajaina ny vokatry ny fifampiresahana amin’izany ary tanterahina ihany koa. Be izay fifampiresahana natao izay nefa tsy tanteraka”, hoy izy.
Mandresy lahatra ny olom-pirenena hatrany ry zareo amin’ireo olom-pirenena voasoratra ao anatin’ny lisitry ny mpifidy: maninona izy no tsy tonga mifidy? Misy fanatsarana tokony hatao ny amin’izany, izay vao mandroso amin’ny fanentanana ny olona hisoratra anarana ao anatin’ny lisitry ny mpifidy.
Misy fahadisoam-panantenana hatrany eo amin’ny olona amin’ny mpitondra tonga: misy olana, ohatra, ny vidim-bary amin’izao, somary diso fanantenana ny olona ao anatin’izay, ka mihemotra hatrany amin’ny fifidianana.